Thursday December 14, 2017 - 18:52:30 in Wararka by Super Admin
Waa qeybtii 2aad ee silsiladda taxanaha ah ee "واغلظ عليهم 2” ama "Ku Ad-adkaada” kaas oo lagu soo bandhigayo duullaankii aroornimo ee lagu qaaday xerada Maleeshiyaadka Maamulka ‘Jubbaland’ ee Magalada Xaawo oo ah degmo saaran xad-beenaadka kala qeybiya Kenya iyo Soomaaliya.
Ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa 11 Sep,2017 waxay weerar xoog kugal ah ku qaadeen saldhigga, Iyagoo halkaas ku dilay tobanaan ka mid ah ciidamada maamulka Axmed Madoobe, waxayna ku qabsadeen gabi ahaanba saldhigga ciidanka iyo wixii ku jiray.
Muuqaalka ugu horeeya ee lagu daahfurayo filimka waa muuqaalka Naftii hurihii fuliyay weerarka kaas oo uu wejigiisu ka bidhaamayo sharafka iyo ciziga mu’mininka, kuna qalabeysan hubka dagaalka iyo Dareeska Military-ga. Axmad Jaamac Nuur oo ku magacdheer (Zubeyr) ayaa jeedinaya dardaarankiisii ugu dambeeyey ka hor inta uusan dhaqaaqlin.
Linki Toos Ah degso MP4
Qaab kale ku daawo halkan .
Filimka oo Taya sare ah ka degso Telegram-ka @somalimemo
Diyaarad sahay usidday ciidamada AMISOM oo ku gubatay Garoonka Beledweyne.